oscillating နှင့် rotary tool - Mibond စက်ပစ္စည်းများအကြားခြားနားချက်
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / လှိုနှင့် rotary tool ကိုအကြားခြားနားချက်
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-03-27 မူလ:ဆိုက်ကို
လက်ကိရိယာများနှင့်လျှပ်စစ်ကိရိယာများသည်အိမ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် DIY စီမံကိန်းများစွာတွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ0င်ခဲ့ပြီးကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအတွက်မတူညီသောကိရိယာများအတွက်သင့်တော်ကြောင်းသိရန်အရေးကြီးသည်။ oscillating ကိရိယာများနှင့်ပါဝါ Rotary Toolsဆင်တူပေမယ့်သူတို့မှာကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်,လှံတံRota တွင် Tools များသည် Multi-Protect Tools များဖြစ်သည်မှီခိုကိရိယာများသည်သေးငယ်သောနေရာသို့မဟုတ်ကောင်းမွန်သောအလုပ်အတွက်ပိုမိုအဆင်ပြေသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, တစ် ဦး rota နှင့်အတူမှီခိုtool သို့မဟုတ် oscillating tool သည်သင်၏အလုပ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
ဘက်ပေါင်းစုံနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောစွမ်းအင်ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းကိုရိုးရာအလုပ်တွင်မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ကြိမ် ဦးအမေ ပါဝါထွင်းထုကိရိယာများwငွေသုမူလက hobby tool တစ်ခုအဖြစ်ရောင်းချခဲ့သော်လည်းယခုအချိန်တွင်၎င်းကိုနေရာများစွာတွင်အသုံးပြုသည်။ ဤကိရိယာသည်ဖြတ်တောက်ခြင်း, ထွင်းခြင်း, အရောင်တင်ခြင်း, ကြိတ်ဆုံနိုင်သည်။ နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ tool ကိုသောင်းချီသောသောင်းချီထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်လှိုတစ်မိနစ်လျှင်၎င်း၏တုန်ခါမှုခေါင်းသည်3ဒီဂရီမှထွက်ပေါ်လာပြီး၎င်းသည် variable speed controller ကိုအသုံးပြုသည်, ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အလုံခြုံဆုံးလျှပ်စစ်တစ်ခုဖြစ်သည်ရောင်းရန်ပါဝါကိရိယာများ.
rotaမှီခိုကိရိယာများကိုမကြာခဏမလိုအပ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်မတူညီသော application များစွာတွင်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ROtary DIY ကိရိယာများအရာရာကိုပြောင်းလဲဖို့ကောင်းတယ်, သူတို့ကသေးငယ်တဲ့နှင့်တိကျသောအလုပ်အကိုင်များအတွက်လည်းအခန်းကဏ္ play မှပါ0င်သည်။ ဤကဲ့သို့သောစွမ်းအင်သုံးကိရိယာများသည်များသောအားဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်လှည့်လည်နေသောခေါင်းငယ်လေးများရှိသည်။ ၎င်းသည်ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် polishing သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ သင့်လျော်လျှင်Provel Multi- ရည်ရွယ်ချက် rotary tool ကို kitsရွေးချယ်ထားကြသည်မှီခိုTool သည် Diy legreving projects များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဤကိရိယာ၏တိကျမှန်ကန်မှုသည်အလွန်မြင့်မားပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်မှုပညာရှင်များအသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်.
ဘက်ပေါင်းစုံနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောပါဝါ tool တစ်ခုအနေဖြင့်,oscillating tool ကိုမကြာခဏအချို့သောအစာရှောင်တိရိုးရာအလုပျကိုလုပ်ဖို့အသုံးပြုသည်။ ဤကိရိယာသည်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးဘက်ထရီများကပါ0င်သည်Vicolor Rotary Toolအသေးစားမြန်နှုန်းမြင့်မားသောမော်တာနှင့်လှည့် ဦး ခေါင်းကြီးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုမတူညီသောအလုပ်များအရအစားထိုးနိုင်သည်။ အဆိုပါ rota ပေမယ့်မှီခိုtool ကိုမကြာခဏမလိုအပ်ပါ, ၎င်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်နိမိတ်လက္ခဏာများကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
လှံတံတန်းဆာကိရိယာsတစ်မိနစ်လျှင်သောင်းချီသောလှောင်အိမ်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးတုန်ခါမှုခေါင်းသည်3ဒီဂရီမှထွက်လာပြီး၎င်းသည် variable အမြန်ထိန်းချုပ်မှုကိုအသုံးပြုသည်။အလုံခြုံဆုံးလျှပ်စစ်စျေးပေါပါဝါကိရိယာများ. ၎င်း၏ထူးခြားသောအားသာချက်များအနက်မှတစ်ခုမှာအနီးကပ်ရပ်ကွက်များ၌အလွန်အသုံးဝင်သောနေရာများနှင့်ဆက်စပ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကိရိယာ၏ထောင့်ကို offset လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။Rotaryယေဘုယျအားဖြင့်ကိရိယာများသည်များသောအားဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်မားသည့်မော်တာနှင့်လှည့်လည်နေသောခေါင်းငယ်လေးတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် polishing ကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းမတူဘဲ,rotary ထွင်းထုကိရိယာများ ဖြစ်ဘေးတိုက်အပေါ်ဘေးတိုက်တပ်ဖွဲ့သည်းခံဖို့ဒီဇိုင်း။
အမျိုးမျိုးသော functional oscillating tool ကိုအမျိုးမျိုးသောနှင့်ကိုက်ညီနိုင်ပါသည်Rotary Tool Drill Bitsထိုကဲ့သို့သောဓါး, ဖိုင်, ခြစ်သူနှင့်ကြိတ်စက်ကဲ့သို့။ လက်သမားအတွက်အသုံးအများဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာချိတ်ဆက်မှုနှင့်ကွင်းဆက်သဲခေါင်း, ပါးလွှာသောထောင့်, အဆိုပါ rota လျှင်မှီခိုTool ကိုသင့်လျော်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်လိုက်ဖက်သည်, DIY ပန်းပုစီမံကိန်းအတွက်အလွန်အထောက်အကူပြုသည်, ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောတပ်ဆင်နိုင်သည်လျှပ်စစ် rotary tool mini grinder kitsactching bits, router strands, bits, ကြိတ်ခွဲ bits နှင့် sanding ဗုံများ။
ကောင်းပြီ, မှန်ကန်သောကိရိယာသည်လက်ျာလက်၌ခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ လက်ျာပူးတွဲဖိုင်များနှင့်အတူမစ်ကြီးပါဝါကိရိယာများသည်အလုပ်တိုင်းကိုလုနီးပါးရနိုင်သည်။
Dremel Power Rotary Tool ပါဝါ Rotary Tool ပါဝါထွင်းထုကိရိယာများ ရောင်းရန်ပါဝါကိရိယာများ rotary diy tools တွေကို Dremel Rotary DIY tools များ Provel Multi- ရည်ရွယ်ချက် rotary tool ကို kit Vicolor Rotary Tool အမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ်စျေးပေါပါဝါကိရိယာများ rotary ထွင်းထုကိရိယာများ